“တရုတ်ရဲ့ အိပ်မက်ကို ကျွန်တော်တို့က အကောင်အထည် ဖော်ပေးရတဲ့ သဘောရှိတယ်” | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
“တရုတ်ရဲ့ အိပ်မက်ကို ကျွန်တော်တို့က အကောင်အထည် ဖော်ပေးရတဲ့ သဘောရှိတယ်”
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်တွင် ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းအပါအဝင် စီမံကိန်းများကို နှစ်နိုင်ငံကြား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီမှုများထဲမှ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များ ရှေ့အလားအလာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောက်ဖြူကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဦးထွန်းကြည်ကို မဇ္စျိမသတင်းဌာနမှ သန်းထိုက်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မဇ္စျိမ…. ဦးထွန်းကြည်အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူထားသလဲ။ ဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲ။
ဦးထွန်းကြည်….. ကျွန်တော်က ကျောက်ဖြူကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း မှာ အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ လက်ရှိတော့ စစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်ထားတာ ရှိတယ် နောက်ပြီးတော့ ကျောက်ဖြူစီမံကိန်း ဧရိယာထဲက ကျေးရွာတစ်ချို့ကို စောင့်ကြည့်နေတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာထူးခြားမှုတွေရှိနေလဲပေါ့။ ရှိတဲ့ထူးခြားမှုတွေကို အချက်အလက် ယူတယ်ပေါ့လေ။
မဇ္စျိမ…..မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်သမ္မတလာမယ်။ လာရင် ကျောက်ဖြူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောတူညီမှု ထိုးမယ့် အစီအစဉ်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူဒေသကို စောင့်ကြည့်နေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာတွေပြောစရာရှိမလဲ။
ဦးထွန်းကြည်…..အခုထိုးမှာက သူက Framework က ၂၀၁၈ ကတည်းက ပြီးတာဆိုတော့ အခုကတော့ နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက် ထိုးမယ်ပေါ့။ ဒါက အစိုးရရဲ့ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့လေ၊ ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိဒါမျိုးလုပ်ရင် အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လက်ရှိချိန်ထိ အစိုးရက ဒီစီမံကိန်းအပေါ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။
ပြောချင်တာက ဒီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ သတင်းအချက်အလက် ချပြမှု မရှိဘူး။ နောက်တစ်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပြသနာပေါ့။ အခုဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း ပြည်တွင်းစစ်က အများကြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်။ မဖြစ်မနေ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကို စပြီးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတို့ စက်မှုန်ဇုန်တို့က မလိုဘူးလားဆိုရင်တော့ လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မယ့် စီမံကိန်း ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အခုလာရေတဲ့နက်ဆိပ်ကမ်းကတော့ ဒေသအတွက် အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ အချိန်အများကြီး စောနေသေးတယ်လို့ ထင်တယ်။
မဇ္စျိမ…..ဘာကြောင့်ဒီစီမံကိန်းကို လက်မှတ်မထိုးသင့်သေးဘူး၊ မလုပ်သင့်သေးဘူးလို့ ပြောချင်တာလဲ။
ဦးထွန်းကြည်….. စီမံကိန်းကို မလုပ်သင့်သေးဘူးလို့ ပြောတာက ဒီစီမံကိန်းကို လုပ်ရင် ဒေသအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးရှိမလဲဆိုတာနဲ့ ပြန်တိုင်းတာရလိမ့်မယ်။ အစိုးရကတော့ သူတို့အကျိုးရှိရင် လုပ်တယ်။ ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်သေးဘူးလို့ ပြောလဲဆိုရင် လက်ရှိကျောက်ဖြူမှာ ဂက်စ်တွေ ရေနံတွေ တင်ပို့နေတာ ရှိတယ်။ ရေနံတင်သဘေတွေလည်း သွားနေတာ သုံးလေးနှစ်ရှိနေပြီ။ အဲဒီကနေရလာတဲ့ အခွန်အခတွေ ရှိမယ်၊ အဲဒီကနေရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေရှိမယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးက ဒေသခံတွေအတွက် ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေး ဘာမရှိဘူး၊ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာလေ။ အဲဒီတော့ ခံစရာရှိရင် ကျွန်တော်တို့ပဲ ခံနေရတယ်။ ဒေသခံတွေ အိမ်ယာအလုပ်အကိုင်တွေ ပျက်စီးသွားတယ်။ ရေကြောင်းတွေပျက်စီးသွားတယ်။ ဒေသခံတွေ လုပ်နေတဲ့ ငါးလုပ်ငန်းတွေ ပျက်စီးသွားတယ်။ ဘာအကျိုးအမြတ်မှ ဒေသခံတွေ ပြန်မပေးဘူးဆိုရင် ဒေသခံတွေ တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းလို့ ပြောလို့မရဘူး။
မဇ္စျိမ….စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ဖို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ချက်နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ချက်တွေ လုပ်နေပြီလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကိုရော ဘာပြောချင်လဲ။
ဦးထွန်းကြည်…….အမှန်က စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်မစတင်ခင်မှာ ဒီစီမံကိန်းကို လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာ EIA ၊ SIA လုပ်ရမယ်။အခုတော့ ESIA လို့အစိုးရကသုံးတာပေါ့လေ။ အဲဒီဆန်းစစ်ချက်အစီခံစာ လုပ်နေတုန်း သဘောတူညီမှုထိုးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက် အနှစ်သာရရှိသလဲ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ချင်တယ်။ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် EIA က ကျွန်တော်သိသလောက် အကြံပေးကုမ္ပဏီငှားထားတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း EIA လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကို တင်ဒါခေါ်ပြီးတော့ သူတို့ရွေးချယ်ပြီးပြီလား။ ဒါကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့ ဇူလိုင်လတုန်းကတော့ ကနေဒါက အကြံပေးကုမ္ပဏီကို ငှားထားတယ်။ ပြီးရင်အဲဒီကုမ္ပဏီကပဲ EIA လုပ်မယ့်ကုမ္ပဏီကိုရွေးမယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကမှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုပဲ သဘောတူညီမှုထိုးတော့မယ်။ အခုEIA ကလည်း လုပ်နေပြီဆိုတော့ ရှေ့နောက်ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးလေ။ ဒါဆိုရင် EIA က ဘယ်လိုထွက်ထွက် သဘောတူညီမှုက အတည်လား ဒါမှမဟုတ် EIA အပေါ်မှာပဲ ဒီသဘောတူညီမှုကို အတည်ထားမလလားဆိုတာက မေးခွန်းထုတ်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။
မဇ္စျိမ……ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေကို ဘာများပြောချင်လဲ။
ဦးထွန်းကြည်…. ဒီနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ မငြိမ်းချမ်းပြသနာကို အရင်ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေက နေ့တဓူဝ အိမ်ပေါ်လက်နက်ကြီးကျရတာနဲ့ နေ့တဓူဝ ရွာကနေ ထွက်ပြေးနေရတာနဲ့ အခုဆိုရင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ရောက်နေတာ တစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီ။ မိုင်းနင်းလို့သေတဲ့လူနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အခြေအနေက အတော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီပြသနာကို အရင်ရှင်းပြီးမှာ ဖွံံ့ဖြိုးရေးကို သွားသင့်တယ်။ ဒီစီမံကိန်းက နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ နိုင်ငံအတွက်ဆိုတာထက် တရုတ်ရဲ့ အိမ်မက်ကို ကျွန်တော်တို့က အကောင်အထည် ဖော်ပေးရတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုအင်ထက် တရုတ်လိုအင်က ပိုများနေတယ်။ တရုတ်လိုအင်ကို လိုက်တာမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တရုတ်အနေနဲ့ လာကူညီမလဲဆိုတာက စသွားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
မဇ္စျိမ…..အစိုးရက လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားရင် ကိုထွန်းကြည်တို့လို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ။
ဦးထွန်းကြည်…..အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အစိုးရအနေနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့က အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ လူတွေအတွက် ပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းပြန်လှန်ရလောက်အောင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မဇ္စျိမ…… ဒီစီမံကိန်းမှာ ဒေသခံတွေအတွက် ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ နစ်နာမှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။
ကိုထွန်းကြည်….. အခုဆိုရင် ရေနံတင်သင်္ဘောတွေ ဝင်ထွက်နေတာကြောင့် နိုင်ငံ တကာ ရေလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်‌လေ။ သတ်မှတ်လိုက်တော့ အဲဒီအနီးအနားက ရေလုပ်သားတွေ ငါးရှာလို့မရတော့ဘူး။ အခုပဲ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ ထက်ဝက်လောက်က သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စွန့်လွှတ်ရတော့မယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရလို့ စီမံကိန်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းရသလား ဆိုတော့လည်း စီမံကိန်းမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိဘူး။ မရှိတော့ မလေးရှားကို အကုန်ရောက်ကုန်တာပေါ့ဗျာ။ နေရာစွန့်ခွာ ပိုဖြစ်လာမယ့် သဘောမှာရှိတယ်။